Denizli Ski Center, iyo yakavambwa neDenizli Metropolitan Municipality kuti ive neshoko mukushanya kweguta munguva yechando, yakawedzera kufarira mukufamba-famba. Mwaka uno, Denizli akagadzira ski timu nevatambi vane makumi maviri neshanu. [More ...]
Yakasununguka kosi yeKartepe Municipality yakatanga kudzidziswa. Zvitima izvi zvinopihwa neChipiri neChina nevarairidzi vemitambo vekanzuru kumisangano muKartepe Ski Center. Iyo ski kosi yakarongedzwa mahara gore rega rega neKartepe Municipality. [More ...]
Dzimwe nzendo dzeBursa Sea buses '(BUDO) nzendo nhasi dzadzimwa nekuda kwemamiriro ekunze asina kunaka. Ndege dzakarongwa neBursa Teleferik nhasi dzakadzimwa. Maererano neshoko rakaitwa pane webhusaiti yeBUDO, iyo wachi [More ...]
Culture uye Tourism Ushumiri, akazivisa 2019 basa rayo rezinesi matunhu neminisiparati pekugara nokuongorora vanopupurirwa zvivako muTurkey. Muna Turkey, January-December 2019, kusvika nzvimbo, zvichienzaniswa chete nguva rapfuura gore, muzana [More ...]
Afyonkarahisar City Council yakaita musangano wayo waFebruary. Meya Mehmet Zeybek, uyo akataura hurukuro yekutanga kwemusangano, akataura tsitsi dzake kubva kuna Allah, hama nehama dzedu, [More ...]
Nekuda kwemamiriro ekunze ekunze muDenizli, ngoro yemoto yekitoni yakavharwa nhasi. Zvinoenderana nedatha yeMeteorology Directorate, zvinonzi dutu rakasimba raizoshanda muDenizli nhasi. Dutu kunyevera kuratidza mhedzisiro yayo muguta uye nzvimbo dzakakwirira [More ...]
Uluda ~ Cable yemotokari nzendo dzakadzimwa nekuda kweMhepo yakasimba
Uludaweg Cable Mota Inofamba Inodzingwa NeMhepo Yakasimba; Uludağ, imwe yenzvimbo dzinokosha dzechando uye kushanya kwechisikirwo, yakagamuchira yambiro kune avo vanozoenda nekombi ngoro. Makabati gumi nemashanu paawa paine makabati gumi nemashanu [More ...]